स्मरण शक्ति बढाउने यसरी हो नि त, थाहा छ कि छैन ? – Khabar Patrika Np
स्मरण शक्ति बढाउने यसरी हो नि त, थाहा छ कि छैन ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ०४, २०७८ समय: १७:५६:५२
अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक समयमा सफल हुने चाहनाले कतिपय अवस्थामा हामीले दिमागलाई बढी भन्दा बढी दबाब दिइरहेका हुन्छौं । यो दबाबले गर्दा हाम्रो काम जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, जति राम्रो हुनुपर्ने हो, त्यति भइरहेको हुँदैन । त्यो दबाबले हाम्रो दिमागको स्मरणशक्ति, सिर्जनशीलतामा असर गरिरहेको हुन्छ । स्मरणशक्ति र सिर्जनशीलताको कमी हुनु भनेको केही गर्न चाहने व्यक्तिको लागि खतरनाक अवस्था हो ।
स्मरणशक्ति कसरी बढाउने ? : आफूलाई जुन काम गाह्रो लाग्छ, त्यो काम गर्नुपर्छ । सधै सजिलो काम गर्दा दिमाग सुस्त बन्छ भने गाह्रो काम गर्दा दिमागले चुनौतीको सामना गर्छ । यसो हुनु भनेको दिमागको कसरत बढ्नु हो । जसले गर्दा दिमागको क्षमतामा वृद्धि हुन्छ र स्मरणशक्ति पनि बढ्छ । हेल्थलाइनका अनुसार, चिनीको धेरै सेवन गर्नाले स्मरणशक्ति कम हुन्छ । ४ हजार व्यक्तिमा गरिएको एक अध्ययनमा गुलियो खानेकुरा बढी खाने, कोल्ड ड्रिंक्स बढी पिउने व्यक्तिमा अरु व्यक्तिमा भन्दा स्मरणशक्ति कम पाइएको थियो । चिनीको कम सेवनले शारीरिक तथा मानसिक दुवै स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ । त्यस्तै, राम्रो मानसिक स्वास्थ्यको लागि शरीरमा भिटामिन डीको मात्रा पुग्नुपर्छ । यसको लागि घाममा केही छिन बस्ने, भिटामिन डी युक्त खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ ।
दिमागी खेलहरु खेल्नुपर्छ । दिमागी खेलहरुले दिमाग रिफ्रेस संगै सक्रिय पनि हुन्छ । त्यस्ता खेलहरुले दिमागलाई अभ्यास गराउँछन् । यस्ता खेलहरुले दिमागको शक्ति बढाउँछ । तनावले गर्दा स्मरणशक्ति कम हुन्छ । त्यसैले तनावलाई समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । समस्यामा केन्द्रित हुनेभन्दा पनि समाधान निकाल्न तिर लाग्नुपर्छ । त्यस्तै अत्तालिने बानी छ भने त्यो बानीलाई हटाउनुपर्छ । आफूमा विश्वास गर्नुपर्छ ।
दिमागको कसरत गर्नुपर्छ । यसको लागि बिहानमा ध्यान गर्ने, कुनै एउटा मन्त्र पढ्ने गर्नुपर्छ । त्यस्तै, दैनिक जीवनमा गरिने काम फरक-फरक तरिकाले गर्नुपर्छ । जस्तो कि, कुनै सामान दायाँतिर राख्ने बानी छ भने, बीच बीचमा बायाँ तिर राख्नुपर्छ । यसले एकै दैनिकीले सुस्त भएको दिमागलाई सक्रिय बनाउँछ ।
यसको लागि कहिलेकाहीं घडी बायाँ हातमा बाँध्ने, बायाँ हातले दांत ब्रस गर्ने जस्ता काम गर्न सकिन्छ । शरीरमा कुनै दुखाई छ, कुनै रोग छ भने दिमाग त्यो दुखाइ र स्वास्थ्य समस्यामा केन्द्रित हुन्छ । यसले गर्दा स्मरणशक्ति कमजोर हुन्छ । त्यसैले शारीरिक स्वास्थ्य समस्याको समयमै उपचार गर्नुपर्छ ।
एकोहोरो काम गर्नु हुँदैन । एकोहोरो काम गर्दा हामीलाई धेरै काम गरेको जस्तो लागेतापनि त्यसले दिमागलाई थकित गराउँछ, जसले गर्दा दिमागको क्षमता कम हुँदै जान्छ । त्यसैले विश्राम लिंदै काम गर्नुपर्छ । प्रशस्त निन्द्रा पुग्ने गरि सुत्नुपर्छ । गीत संगीत सुन्ने, समय-समयमा साथीहरुसंग घुम्न जाने आदि स्वस्थ मनोरन्जनका क्रियाकलापमा सहभागी हुनुपर्छ । पानीको कमीले शारीरिक मात्र नभएर मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ । त्यसैले प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ । फलफूलको सेवन बढी गर्ने , चिल्लो र पेट गह्रौं गराउने खानेकुरा कम खाने, बिहान छिटो उठ्ने र शारीरिक अभ्यास गर्ने गर्नुपर्छ ।
मुस्कुराउने, हाँस्ने गर्नुपर्छ । व्यक्ति हाँस्दा उसका दिमागी तन्तुहरु बढी सक्रिय हुन्छन् । यसको साथै हाँसोले हुने सकारात्मक ऊर्जाले दिमागलाई ताजा बनाइदिन्छ । त्यसैले हाँस्ने, सकारात्मक सोंच भएका व्यक्तिको संगत गर्ने गर्नुपर्छ । आफ्नो हेरचाह गर्नुहोस् ।